Forum serasera malagasy Mba ilaina tokoa ve ? - Dinika forum.serasera.org
Mba ilaina tokoa ve ?
Fitohizan'ny hafatra : Mba ilaina tokoa ve ?
angouz - 18/08/2016 18:36
Salama ! Hono ho aho ry mpiady hevitra isany, aminareo ve dia tena ilaina tokoa ve ny mpimasy ? satria dia izao no antony fanontaniko, raha efa tena mandinika ny olona mpampiasa sy mpilalao ody izaho dia ny nahatsikaritra fa dia hery ho entina an-demena ny hafa ilay tena antony, ka ny vokany dia lasa mahery ny dahalo @izao sy ny asan-jiolahy rehetra ka maninona no tsy azo foanana io asana mpimasy io ?
shafira - 05/07/2017 07:38
ka io nge ts ho fosn mits e,enw fotsn n miezaka ts mankan tson
batsilana - 04/09/2017 08:14
tena sarotra be ny hamoana azy io fa ny tokony hatao fotsiny dia ny mitandrina fa tena tsy mamela mahazo io an
mirananirina - 10/06/2018 06:38
Ahoana hoy ianao fomba hanafoanana izany? Betsaka ihany Malagasy minomino foana sy manaraka domban-drazana.
T@ izahay namadika izao ohatra dia hoe tsy maintsy entina miodina impito ny razana navoaka sy fonosina vao azo averina ao ampasana. Dia natao izay. Tsy maintsy atodika ary ny lohany fa tsy ary sns..
Fa Raha izaho manokana tsy mba minomino foana dia avy dia nampidiriko ny ahy fa tsy nentiko niodikodina izany. Mazava ho azy tsy mila maka olona mpimasy aho hanoro izay atao.
Fa hoe izay hono fomba moa tsy izao no mandidy dia narahina izany
mirananirina - 10/06/2018 07:04
Ahitsiko kely lazaiko fa misy tsy mety.
Fomban-drazana amiko dia tsara tokoa sady mila arahina, fa ny mpimasy no tokony tsy arahina. Izay tiako lazaina. Satria amiko dia tsy fomban-drazana mpimasy fa finoanoam-poana. Raha hanamboatra trano ohatra dia mbola betsaka maka mpimasy hoe rahoviana fotoana! Mila atao an’izao sy izao.
Raha mamadika ohatra dia fonosona lamba ny razana dia vita fa tsy ilaina ilay mpimasy hoe mila atao an’izaao sy izao. Ilay anay aza na fomba famatorana ilay razana dia mbola misy fombafomba toy izao sy izao. Atao akory !
Rajasanagara - 10/09/2018 20:00
Ny razana miodina im pito no lasa zanahary. Izay ilay izy, hafaka hitahy anao sy ny ankohonanao izy rehefa lasa Zanahary.
hery - 10/09/2018 20:41
Sao dia mba diso izany